Download Netflix Apk Zakamuva Version Lokusebenza Amadivayisi Android
Thwebula Apk (27.20 MB)
4.4 (89.0%) 6,538,322 Amavoti
I-Netflix iyisevisi yokubhalisa yomhlaba ehamba phambili yokubuka iziqephu ze-TV namabhayisikobho kudivayisi yakho oyintandokazi. Lolu hlelo lokusebenza lweselula lwe-Netflix lunikeza isipiliyoni esihle kunazo zonke noma kuphi, noma kunini.
Thola uhlelo lokusebenza lamahhala njengengxenye yobulungu bakho be-Netflix futhi ungakwazi ukubuka masinyane ama-episodes nama-movie ezinkulungwane kudivayisi yakho yeselula.
Uma ungelona ilungu le-Netflix ubhalisele i-Netflix bese uqala ukujabulela ngokushesha kudivayisi yakho yeselula ngesilingo sethu samahhala senyanga eyodwa.
I-Netflix isebenza kanjani?
• Ubulungu be-Netflix bukunika ukufinyelela kwimiboniso ye-TV engenamkhawulo namabhayisikobho ngenani elilodwa lenyanga eliphansi.
• Ngehlelo lokusebenza lwe-Netflix ungakwazi ukubuka ngokushesha ama-episodes nama-movie amaningi we-TV njengoba ufuna, njalo uma ufuna, noma kunini lapho ufuna khona.
• Ungadlulisa amehlo ekukhethweni okukhulayo kwezinkulungwane zezihloko, neziqephu ezintsha ezongezwa njalo.
• Sesha izihloko futhi ubuke ngokushesha efonini yakho noma ohlwini olwandayo lwamadivayisi asekelwe.
• Linganisa iziboniso zakho ozithandayo nama-movie futhi usitshele ukuthi yini oyithandayo ngakho-ke iNetflix ingakusiza ukusikisela iziqu ezinhle kakhulu kuwe.
• Qala ukubuka kudivayisi eyodwa, bese uqala ukubuka kwenye. Bheka netflix.com kuwo wonke ama-TV, izidakamizwa zegeyimu, amaphilisi, amafoni, ama-Blu-ray abadlali futhi usethe amabhokisi aphezulu ongabheka ku-Netflix.
Ngokuchofoza u-INSTALL, uvuma ukufakwa kwesicelo se-Netflix nanoma yikuphi ukubuyekezwa noma ukuthuthukiswa kulokho.
Ngokulanda lolu hlelo lokusebenza uyavumelana ne-Netflix Imigomo Yokusebenzisa kanye Isitatimende Sobumfihlo , esitholakala ku-http: //www.netflix.com. Ukuze kucaciswe, izakhamuzi ze-European Economic Area (EEA) zithathwa njengezivume (kunokuba zivumelane) Isitatimende Sobumfihlo.
Inhlinzeko yobulungu be-Netflix yenyanga engu-1 iyatholakala okokuqala nakwamanye amalungu wangaphambili futhi ayikwazi ukuhlanganiswa nanoma yikuphi ukunikezwa. Ukufinyelela kwe-Intanethi kanye nendlela yokukhokha evumelekile kuyadingeka ukuthenga isipho. I-Netflix izoqala ukukhokhisa indlela yakho yokukhokha imali yeNetherflix yobulungu ekupheleni kwenyanga yamahhala ngaphandle kokuthi ukhansele ngaphambi kokuphela kwenyanga yokuqala . Ubulungu bakho be-Netflix kubhaliswa inyanga nenyanga ongakhansela nganoma isiphi isikhathi. Yiya ku-"Akhawunti Yakho" kwiwebhusayithi ye-Netflix ukuze uthole imiyalelo yokukhansela. Akukho ukubuyiselwa kwemali noma isikweletu sezinkathi zokubhalisa zanyangazonke zonyaka. Idivayisi ephuma ku-Netflix (eyenziwe futhi idayiswa ngokwehlukile) uxhumano lwe-intanethi ye-broadband kuyadingeka ukuthi ibukele ngokushesha.
Ukuze uthole imigomo nemibandela ephelele, sicela uvakashele http://www.netflix.com/termsofuse
Ngokwesitatimende sobumfihlo, sicela uvakashele http://www.netflix.com/privacy
umzingeli we-dinosaur 2019
Uhlelo lokusebenza olufihlekile - ubuso bokuguga, isithwebuli sombuso
ukupheka ukudla okupheka isidlo sokudla emhlabeni
i-horoscope ne-palm master-palm scanner nokuguga
bukela i-tv online
I-TV yase-Indonesia - Phila zonke iziteshi eziqondile i-HD
nimo tv - ukudlala. phila. wabelane.
ikhodi ye-coreader- qr ne-barcode scanner
umbala ngenombolo, umbala wepikelli - ubuciko bamaphikseli
tikbooster - abalandeli nabalandeli kanye nokuthandwa
Phinda uthole amavidiyo asusiwe nge-imeyli
kusiqalisi - thanda i-emojis ne-gifs, izingqikithi
showmax - bukela imibukiso ye-tv namabhayisikobho
I-zodiac izibonakaliso ezinhle - i-palmistry ne-horoscope 2019
sabc tv online
Trending Videos & News - 2019
ubuso bokufunda - ubuso obudala, izimpawu
I-popcorn isikhathi: ukubukela ama-movie nemibukiso ye-tv
ubheke ngasese - ukubuka ubuso, ubuhle bezinkanyezi, i-horoscope